Nezvedu - LST Technology Co., Ltd.
Kuhwina-kuhwina chete kunogona kugara kwenguva yakareba, chete-kwenguva refu ndiyo inogona kurarama, uye chete-refu-nguva inogona kukura
1000-3000 mativi metres
OEM / mutengi chitaridzi chakapihwa
-Tine edu mashanu epamusoro tekinoroji yekutsvagisa nekusimudzira vashandi
-professional ekisipoti yekutengesa timu, ichakutungamira kuti usarudze akakodzera michina yeprojekiti yako.
-Engineers anowanikwa kuita munda kugadzirisa uye kugadzirisa basa mhiri kwemakungwa
Isu tinopa OEM sevhisi uye yehupenyu-nguva mushure-kutengesa sevhisi
Chengdu LST Technology Co., Ltd. yakavambwa muna 2009 yakaiswa muChengdu, Sichuan, 1,000-3,000 mativi emamirimita, yakanangana nemhinduro yese yechokoreti yekugadzira chikafu uye kurongedza, senge chokoreti yekudyisa sisitimu, chokoreti bhora chigayo, chokoreti yekupfeka muchina, chokoreti tempering muchina, chokoreti enrobing uye yekushongedza muchina , otomatiki Oat-Meal Chocolate Production Line, izere otomatiki chokoreti kuisa dhizaini uye imwe matchmachine.
Isu tinoita R & D kugadzirwa, kutengesa uye mushure mekutengesa sevhisi-nhanho, Tine timu yehunyanzvi yeR & D nemidziyo yakasarudzika .Tiri kugara tichivandudza nekuvandudza tekinoroji yedu yekuvandudza michina yedu nemabasa ane simba. 3 akasiyana matekinoroji epamusoro uye matsva inoitwa gore rega rega.
Isu takabudirira kupasa iyo ISO9001 2015 yemhando yekutarisira system chitupa, isu takabudirira kupasa chigadzirwa chitupa cheeuropean CE, isu preform zvakanyatso kunaka kweanodzora mune yega nzira yekugadzira nevanoongorora vedu. Panguva imwecheteyo, zvigadzirwa zvinogadzirwa nemidziyo yedu zviri pamberi peindasitiri yevhisi zvakare.Kunyange pamusika wepamusha, zvishandiso zvedu zvakatengeswa zvakanyanya kunyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu eGerman, India, Vietnam, kumaodzanyemba. Korea, Canada, Australia, Russia, Ecuador, Malaysia, Romania, Israel, peru.
Kubva pane teneti yekutenda, isu tichaedza nepatinogona napo kugadzira uye kugadzira zvigadzirwa zvakanakisa zvevatengi vedu, Isu tinozvipira isu kuhwina kuvimba nekutsigirwa kubva kune vatengi nekupa mhando yepamusoro chokoreti michina uye basa rakanakisa!
R & D ZVINOGONESESA
Munguva pfupi yapfuura takagadzira yakanyatsogadziriswa bhora-yekugaya muchina, iine kukuya kwakaringana kwe20-30 micrometer, iri kanenge kakapetwa kagumi zvakanyanya kupfuura sirivheri yekumba. Iye zvino tave nehunyanzvi hwepamusoro-soro epasi rese DTG inoenderera polishing maitiro. Iko kushanda kwekushanda ingangoita makumi matatu nguva dzekupota poto yekumba. PLC inoita kuti ive yakatwasuka, yakapusa kushandisa edu quipemtns uye kugadzikana mukugadzira maitiro.
Isu tinopa sevhisi yeOEM uye isu tiri kutarisira kushanya kwako.